I-Adobe ibhengeza ukuba iya kuyilahla inkxaso kwiFlash ngo-2020 Iindaba zeGajethi
UIgnacio Sala | | ngokubanzi, Izaziso
Ngaphezulu kweminyaka eli-10 eyadlulayo, itekhnoloji eyayisetyenziselwa ukwenza ezona webhusayithi zisetyenziswa kakhulu, ubuncinci ezithandwayo, yayiyiFlash, itekhnoloji eyasivumela ukuba senze oopopayi abathandekayo bamaphepha ewebhu. Kancinci kancinci yayihluka isetyenziselwa ukwenziwa kwakhona kweevidiyo, ukwenziwa kwezaziso…. kodwa ukufika kwetekhnoloji ye-HTML kunye nenani elikhulu leengxaki zokhuselo ezibonelelwe leli qonga leAdobe kule minyaka idlulileyo, unyanzele inkampani ukuba ililahle ngokupheleleyo eli qonga lokudlala, iqonga elibekwe ecaleni kwiinguqulelo zamva nje zezikhangeli eziphambili, kuthintela ngokwendalo ukuveliswa kwakhona, nangona umsebenzisi echaza ukuba umxholo unokuphinda uveliswe kwakhona.
Kwingxelo eyithunyelwe yinkampani kumajelo eendaba, iyangqina ukuba abaphuhlisi bewebhu baqala ukukhangela ukhetho ngaphambi kowama-2020, xa inkampani iza kuyeka ukuthumela uhlaziyo kunye nenkxaso kwiFlash. Okwangoku ukhetho olunokubakho kuphela yi-HTML 5, ekwasivumela ukuba senze oopopayi abanomtsalane, eyona nto iphambili kwiFlash, kodwa ngobukhulu bayo buncinci. Ubunzima beefayile kule fomathi sesinye sezizathu eziphambili zokuba kutheni uSteve Jobs kwasekuqaleni kwala ukuhambisa ukungqinelana kwe-iOS.
Kunyaka ophelileyo bekunzima kakhulu kwiFlash, unyaka apho uhlaziyo ngalunye olusibonisa khona iingxaki ezitsha zokhuseleko, ezivumela abahlobo abavela ngaphandle ukufikelela kwikhompyuter yethu phantse ngaphandle kwengxaki, kulapho iAdobe yaqala ukuqaphela ukubanakho ukuqhubeka nokuphuhlisa isoftware yayingasasebenzi okanye ikulahle ngokupheleleyo. Okokugqibela bakhethe olona khetho lusengqiqweni, ukushiya eli qonga, kodwa banikele ixesha elifanelekileyo lokuba abaphuhlisi baqale ukulungelelanisa amaphepha abo ewebhu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Adobe ibhengeza ukuba iyakushiya inkxaso yeFlash ngo-2020